Playboy သန်းနိုင် | Myanmar Mp3 Album
Home / Myanmar Artist / အဆိုတော် (ကျား) / Playboy သန်းနိုင်
Category Archives: Playboy သန်းနိုင်
ပလေးဘွိုင်းသန်းနိုင် ရဲ့ ရွေှ့သီချင်းများ (Original High Quality)
ပလေးဘွိုင်းသန်းနိုင် ရဲ့ ရွေှ့သီချင်းများ (မူရင်းဗားရှင်း/အရည်သွေးကောင်း) ၁။မီးမဆော့နဲ့ ၂။ခေါက်ထားသူငယ်ချင်း ၃။နေနဲ့လ၊အရှေ့နဲ့အနောက် ၄။ညမွှေးပန်း ၅။ဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ငြိမ့်ငြိမ့်လေး ၆။မကျေနပ်ရင်အသေသတ် ၇။လမ်းဆက်လျှောက်မယ် ၈။ရွှေတောင်ကြား ၉။အချစ်နိဗ္ဗာန် ၁၀။သီချင်းသေရင်လိုက်သေမယ် ၁၁။အရက်ချို အချစ်ခါး ၁၂။ရတာမလို လိုတာမရ ၁၃။တစ်ခြမ်းပဲ့ အသည်း ၁၄။ပကာသန ဇာတ်ပျက်သမား ၁၅။တစ်ယောက်ထဲပဲချစ်တယ် ၁၆။ချစ်သူဖက်က ရှေ့နေလိုက်မယ် ၁၇။မဟာရန်သူ အချစ်တော်ကြီး ၁၈။မာနမင်းသား ၁၉။အတ္တသမား Mediafire Megaupload iFile
August 4, 2011 heinartlover High Quality Albums Playboy သန်းနိုင်2Comments
အမြန်ယာဉ် (၂) – ပလေးဘွိုင်းသန်းနိုင် + အယ်လ်ခွန်းရီ
၀၁. ချစ်ဒမြ – အယ်လ်ခွန်းရီ ၀၂. အချစ်ဆုံးညီမ – သန်းနိုင် ၀၃. လွမ်းအိမ်မက်ချစ်မျက်ရည် – သန်းနိုင် + အယ်လ်ခွန်းရီ ၀၄. အိမ်အိုဟောင်း – သန်းနိုင် ၀၅. လွန်းကြင်ငှက် – အယ်လ်ခွန်းရီ ၀၆. မိန်းမနဲ့ ယောက်ျား – သန်းနိုင် ၀၇. ရောမကျောက်ရုပ် – အယ်လ်ခွန်းရီ ၀၈. ကိုယ်ကအဖြူသူကအမဲ – သန်းနိုင် ၀၉. မငိုတတ်ဘူး – အယ်လ်ခွန်းရီ ၁၀. တိမ်ပေါ်ခုန်တက်ကလိုက်မယ် – အယ်လ်ခွန်းရီ ၁၁. မိုးကောင်းကင်ခရီး – သန်းနိုင် + အယ်လ်ခွန်းရီ ၁၂. နှစ်ဆယ့်တစ်ရာစုလူသားသီချင်း – သန်းနိုင် ၁၃. အတိတ်မျက်ရည် … Continue Reading →
May 29, 2011 လူသား အခွေ (အများ) အယ်လ်ခွန်းရီ Myanmar Oldie Albums Playboy သန်းနိုင်2Comments
အမြန်ယာဉ်(၁) – ပလေးဘွိုင်းသန်းနိူင် + အယ်လ်ခွန်းရီ
၀၁. ချစ်သူတွေရဲ့ တယ်လီဖုန်း – အယ်လ်ခွန်းရီ ၀၂. ချစ်သောမမ – သန်းနိူင် ၀၃. အမြန်ယဉ် – အယ်လ်ခွန်းရီ ၀၄. လူငယ်လေးတစ်ယောက်အကြောင်း – သန်းနိူင် ၀၅. ကောင်းလား – အယ်လ်ခွန်းရီ ၀၆. မငိုနဲ့ မောင်မောင် – သန်းနိူင် + အယ်လ်ခွန်းရီ ၀၇. ဂဲမလောက်တီးဝိုင်း – အယ်လ်ခွန်းရီ ၀၈. ရင်ထဲမိုး – သန်းနိူင် ၀၉. အထူးသတိပြု – သန်းနိုင် ၁၀. နှင်းဆီကိုကို – အယ်လ်ခွန်းရီ ၁၁. သုံးရာသီချစ်သူ – သန်းနိုင် ၁၂. အနှေးယာဉ် – သန်းနိုင် ၁၃. ကိန္နရာချောင်းခြားအမှာစကား – … Continue Reading →
May 28, 2011 လူသား အခွေ (အများ) အယ်လ်ခွန်းရီ Myanmar Oldie Albums Playboy သန်းနိုင် 1 Comment
မောင်မောင်မင်းသားလေး – သန်းနိူင် + ပုလဲ
၁. မီးခိုးများ – သန်းနိူင် ၂. စိတ္တဇ – ပုလဲ ၃. စဉ်းစားကြည့် – သန်းနိူင် ၄. မောင်မောင်မင်းသားလေး – ပုလဲ ၅. ဂျစ်ပစီမိုးတိမ် – သန်းနိူင် ၆. ၃၆၅ ရက် – ပုလဲ ၇. လွမ်းတယ် – ပုလဲ ၈. အမည်းလားအဖြူလား – ပုလဲ ၉. ဂျင်းဘောင်းဘီအပြာ – သန်းနိူင် ၁၀. ကိုကိုပဲပြောတော့ – ပုလဲ ၁၁. နှင်းဆီ – သန်းနိူင် ၁၂. ကြည့်ပါလား – ပုလဲ ၁၃. အချစ်မော်ကွန်း – သန်းနိူင် ၁၄. အချိန်နဲ … Continue Reading →
May 15, 2011 လူသား အခွေ (အများ) ပုလဲ Myanmar Artist Playboy သန်းနိုင် 1 Comment
ပန်းသီးဖီလင် – သန်းနိူင် + ပုလဲ
၁. ပလေးဘွိုင်းလာပြီ ၂. ဟေ့ကောင်မလေးဘယ်လိုလဲ ၃. အဘိုးကြီးအိုခါးကုန်းကုန်း – ပုလဲ ၄. ပင်လယ်ပြင်သင်္ဘောမှောက်ခြင်း ၅. ပန်းသီးဖီလင် ၆. လမင်းလေးသန်းခေါင်ယံ ၇. ဒိုင်းနမိုက်အချစ် – ပုလဲ ၈. အနုပညာသမားတစ်ယောက်အကြောင်း ၉. ဘာမှမတက်နိုင်ပါ ၁၀. ဟေ့ကောင်မလေးဘယ်လိုလဲ ၁၁. ဇွတ်ချစ်မယ် – ပုလဲ ၁၂. ရေစီးထဲကပန်းပွင့်လေးများ ၁၃. စီးကရက်မီးခိုးများ ၁၄. ရည်းစားရှိမရှိကိစ္စမရှိ ၁၅. ဒစ္စကိုက – ပုလဲ ၁၆. လမ်းကလေးပေါ်မှာ ၁၇. လွတ်မြောက်ရေးသို့MeDiAfIrE Special Credits to Ms. KHH
May 14, 2011 လူသား အဆိုတော် (ကျား) အဆိုတော် (မ) အခွေ (အများ) ပုလဲ Myanmar Artist Myanmar Oldie Albums Playboy သန်းနိုင်3Comments
လူဆိုး – ပလေးဘွိုင်းသန်းနိူင် + ပုလဲ + အယ်လ်ခွန်းရီ
၁. လူဆိုး – သန်းနိူင် ၂. ငါ့မှာရူး – ပုလဲ ၃. တစ်ချစ်တည်း – အယ်လ်ခွန်းရီ ၄. သူငယ်ချင်းဂျိုကာ – သန်းနိူင် ၅. အချစ်အာမခံ – ပုလဲ ၆. ငယ်ရွယ်စဉ်ခါပညာရှာ – အယ်လ်ခွန်းရီ ၇. ချောင်းကြည့်ပေါက်ကလေး – သန်းနိူင် ၈. မေ့လိုက် – ပုလဲ ၉. သိပ်ချစ်တာနဲ့ မလုံလောက်ဘူး – အယ်လ်ခွန်းရီ ၁၀. မေတ္တာပေးပါသစ္စာရှိတယ် – သန်းနိူင် ၁၁. ဒီလိုဆိုပျော်မှာလား – ပုလဲ ၁၂. ချစ်ပြီဆိုမှဖြင့် – အယ်လ်ခွန်းရီ ၁၃. အသဲစားဘီလူး – သန်းနိူင် ၁၄. မလှသေးတဲ့ကဗျာ … Continue Reading →
May 12, 2011 လူသား အခွေ (အများ) အယ်လ်ခွန်းရီ ပုလဲ Myanmar Artist Myanmar Oldie Albums Playboy သန်းနိုင်6Comments
ရွှေသီချင်း(၃) – ပလေးဘွိုင်းသန်းနိူင်
၁. ဟေ့ကောင်မလေး ၂. မဆိုအချစ်ဝံ့ဘူး ၃. နေရစ်ခဲ့ ၄. ရပါတယ် ၅. လမ်းကလေးပေါ်မှာ ၆. ဆု(၂) ၇. ရင်ခုန်အချစ် ၈. ငါတောင်းတဲ့ဆု ၉. ပင်လယ်ပြင်သင်္ဘောမှောက်ခြင်း ၁၀. မင်းသားလို့ မခေါ်နဲ့၁၁. လမင်းငယ် ၁၂. ကြင်နာသူသို့ တယ်လီဖုန်း ၁၃. စိတ်ကူးယဉ် ၁၄. အချစ်ရှိတဲ့တိုင်းပြည် ၁၅. စီးကရက်မီးခိုးများ MeDiAfIRe MiRRorcreator ( Whole File To Download ) Special Credits to Ms. Khin Hnin Hlaing
May 9, 2011 လူသား အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) Myanmar Artist Myanmar Oldie Albums Playboy သန်းနိုင် Leaveacomment
ရွှေသီချင်း (၂) – ပလေးဘွိုင်း သန်းနိူင်
၁။ အချစ်ရှုး ၂။ မိုးကလေးရွာရင်နော်ဗျာ ၃။ ငိုပေဦးတော့ ဂစ်တာလေး ၄။ ရွှေသူခိုး ၅။ ချစ်သွားပြီ ကလေးရေ ၆။ ဘယ်နေရာလဲ အချစ်ရေ ဘယ်နေ့လဲ ၇။ နင့်အတွက် ငါ့အချစ် ၈။ ခွင့်လွှတ်တယ် ၉။ မုန်း မုန်း မုန်း ၁၀။ ဝေးကြပြီ ၁၁။ ဘုန်းတော်ဘွဲ့ မလိုချင်ပါ ၁၂။ အဆက်ရာလေးနဲ့ အသည်း ၁၃။ အရိုင်း ၁၄။ ဇနပုဒ်သား ၁၅။ ကပ်ခွာလေး ၁၆။ အမူးသမား MeDiAfIrE MiRRorcreator ( Whole Album Download ) Credits To : Khin Hnin Hlaing
May 4, 2011 လူသား အဆိုတော် (ကျား) Myanmar Artist Myanmar Oldie Albums Playboy သန်းနိုင် Leaveacomment
မရဲ့မောင်လေး– ပလေးဘွိုင်း သန်းနိုင် & ပုလဲ
၁။ မရဲ့ မောင်လေး ၂။ ချစ်ရင် စွန့်စား ၃။ ကိုကိုရေ ရှုးပြီ ၄။ ဒက်ဆန်းကား အနီ ၅။ ချစ်လိုက် ၆။ အသည်းလေးလဲ ပြိုနေပြီ ၇။ ချစ်ကမ္ဘာမှာ ၈။ နှလုံးသား မီးလျှံများ ၉။ မင်းအခန်း မင်းပြန်ဦး ၁၀။ စိမ်းလန်းတဲ့ သစ်တောလေး ၁၁။ မင်္ဂလာ နံနက်ခင်း ( Good Morning ) ၁၂။ လူကြမ်း မင်းသားလေး ၁၃။ မိမီး ၁၄။ ဆွေး ၁၅။ အလွမ်းဘုရင်မလေး ၁၆။ ရှုးပြီ ၁၇။ ဘ၀ရဲ့ ခရီးလမ်း Mediafire MiRRorcreator Credits to Khin Hnin … Continue Reading →
April 16, 2011 လူသား အခွေ (အများ) ပုလဲ Myanmar Artist Myanmar Oldie Albums Playboy သန်းနိုင် Leaveacomment
01 ။ တူရိယာလုလင်- စိန်လွင် 02 ။ ကျောင်းသွားဖေါ်- တက္ကသိုလ်အေးမောင် 03 ။ ပန်းပုသူဇာခင်- တင်အောင်မိုး 04 ။ ရန်ကုန်သူ- စိန်လွင် 05 ။ ယဉ်တဲ့သဇင်- သန်းသန်းနွယ် 06 ။ တမိုးသစ်လေသောအခါ- သိန်းတန် 07 ။ လူချွန်လူကောင်း- စိန်လွင် 08 ။ သူကလေး- သန်းနိုင် 09 ။ ပြုံးတုန့်လှယ်- တင်အောင်မိုး 10 ။ သုံးရာသီ- တက္ကသိုလ်အေးမောင် 11 ။ လှသွေးရီ- သိန်းတန် 12 ။ သူနဲ့သာ- ပုလဲ 13 ။ ဘ၀သခင်- တင်မိုးခိုင်
June 5, 2010 Yee Wai Aung အခွေ (အများ) စိန်လွင် မြန်မာပြည်သိန်းတန် ပုလဲ တက္ကသိုလ်အေးမောင် Myanmar Oldie Albums Playboy သန်းနိုင် 1 Comment